Chelsea oo loo awood sheegtay – Mogadishutimes
By Feysal Abdi Gurey | Mogadishu Times,
Waxaa maanta oo Sabti ah dhacay ciyaar aad u qiimo badan oo ay isaga hor yimaadeen labada kooxood ee Chelsea iyo Crystal Palace. Waxaa ciyaarta lagu qabtay garoonka weyn ee Stamford bridge ee ku yaala magaalada London.
Waxaa marti loo ahaa kooxda Chelsea ee hadda hogaanka u haysa horyaalka Ingiriiska. Crystal Palace waxaa u rumowday riyadoodii ahayd in ay Chelsea kaga bidiyaan hoygooda. Daqiiqadii 5aad ee qeybtii hore ee ciyaarta ayaa Chelsea ay u suurta gashay in ay gool kaga naxsadaan kooxdii martida u ahayd.
Goolka waxaa dhaliyay ciyaaryahanka reer Spain ee C. Fabregas kadib markuu baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka reer Belgium ee Eden Hazard.
Muusan noqon goolkaas mid waara oo wax badan lagu faa’iido, afar daqiiqo ka dib waxaa ruxmay shabaqa Chelsea waxaana u daba maray ciyaaryahanka waayahan dambe dheesha fiican lasoo baxay ee reer Ivory coast ee Wilfried Zaha waxaa baas qurux badan ku caawiyay ciyaaryahanka reer Belgium ee C. Benteke.
Saddex daqiiqo ka dib Palace ayaa la timid goolkii guusha kadib markuu Zaha uu u abaal guday ninkii baaska quruxda badan siiyay ee Benteke. Benteka wuxuu dhaliyay gool aad u qurux badan.
Waxaa la wada saadaalinayay in ay Chelsea ku badin doonto si fudud ayna jawaan goolal ah kaga badin doonto Palace laakiin taasi ma dhicin oo waxaa ka hor istaagay difaaca Palace ee adag ee uu hogaaminayo Mamadou Sakho.
Kulamadii kale ee la ciyaaray waxa ka mid ahaa Manchester United oo marti galisay West Bromwich Albion. Natiijadii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay bareejo goolal la’aan ah.
West Bromwich ayaa waxa u suurta gashay iney dhibic muhiim ah ka soo hesho Old Trafford stadium. United ayaa waxaa ka maqnaa ciyaartooy dhowr ah oo ay ka midyihiin Paul Pogba, Juan Mata oo dhaawacyo ku seegay, halka Zlatan Ibrahimovic iyo Elder Herrera ay ganaaxnaayeen.
M. United ayaa iska lumisay fursad ay ugu dhawaan lahaayeen bahwadaagooda Manchester City.
Merseyside Derby, Everton oo marti ku ahayd Anfield Stadium ayaa guul daro qaraar kala soo kulantay Liverpool. Kulan kaan oo ahaa mid aad loo wada sugayey ayaa waxaa xiisa u yeelay in uu daawanayey jilaaga caan ka ah ee Daniel Craig oo lagu yaqaano filimada 007, Craig ayaa ah taageere Liverpool.
Macalin Jurgen Klopp ayaa kala horyimid dhigiisa Ronald Koeman shax adag. Daqiiqadii 8aad ee qeybtii hore ee ciyaarta ayey Liverpool la timid goolkii furitaanka, Sadio Mane ayaa gool qurux badan u dhaliyay naadigiisa ka dib caawin uu ka helay saaxiibkiis R. Firmino.
Everton ayaa isla qeybtii hore daqiiqadii 26aad la timid goolka barbaraha, waxaana u ansixiyay daafaca dadabka midig M. Pennington oo caawin ka helay A. Williams. Daqiiqadii 31aad P. Countinho ayaa Liverpool mar labaad hogaanka u dhiibay.
Ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxaa qeybtii koowaad lagu kala nastay 2-1 oo ay Liverpool ciyaarta ku hogaaminaysay. Qeybtii labaad markii la isku soo laabtay, Liverpool oo gacanta ciyaarta ku haysay ayaa ahayd kooxda markasta laga filan karay goolka 3aad.
Daqiiqadii 60aad, Divock Origi ayaa Everton ku karbaashay goolkii 3aad ka dib caawin uu ka helay P. Countinho kaa soo god ku riday rajadii ay Everton ciyaarta dib ugu soo laaban laheyd. P. Countinho oo labo gool gacan ka geystay ayaa loo magacaabay xidigii garoonka ugu fiicnaa.
Zinadine Zidane, oo shirkiisii jaraa’id ee maanta ku sheegay in uusan maamuli doonin naadiga ay aadka u xafiltamaan ee Barcelona. Zindane oo saxaafada wax ka weydiisay hadal uu warbaahinta siiyay G. Pique ayaa ku jawaabay in qof kasta fikir kiisa xor u yahay. Zindane ayaa mar la su’aalay in uu Barcelona macalin ka noqon doono ku gaabsaday “maya”.
Ciyaartoyta uu heshiiskooda dhamaanayo
Ciyaaryahanka reer Chile ee Alexis Sanches, waxaa u dhamaanaya heshiis kii uu kula jiray Arsenal. Heshiiska wuxuu ahaa130 kun oo Pound laakiin wuxuu hada rabaa 250 kun oo Pound. Arsenal ma awoodo bixinta lacag intaas la eg laakiin waxaa lacagtaas diyaar la ah Juventus, InterMilan, Chelsea, Bayern Munich iyo PSG. Arsenal ma rabto in ay ka iibiso koox ka ciyaarta Premier League sida Chelsea.
Yaya Toure, wuxuu qandaraaskiisa dhacayaa xagaagaan. Kooxaha ku raadjooga waxaa ka mid ah InterMilan, PSG, Tianjin Quanjian oo ka ciyaarta China Super League iyo Manchester United.
Romelu Lukaku, ayaa go’aansaday in uu isaga tago naadigiisa Everton ka dib markii Chelsea ay soo bandhigtay in ay wiilkooda hore ku doonayaan 70 million oo pound. Dhaliyaha reer Belgium ayaa hogaanka u haya gool dhalinta horyaalka Premier League.
Eden Hazard waxaa 100 milyan oo pound ku raadinaya kooxda Real Madrid. Wuxuu hadda heshiis kula jiraa Chelsea. Real Madrid waxay rabaan in ay 26 jirkan ku badalaan Cristiano Ronaldo marka uu fadhiisto.
Ciyaarihii maanta waxay ku dhamaadeen sida tan: